आफ्नै फिल्म प्रचारमा सलोनको समय छैन ! « Ramailo छ
आफ्नै फिल्म प्रचारमा सलोनको समय छैन !
असार २९ गते नायक सलोन बस्नेत अभिनित फिल्म ‘बाबु कान्छा’ प्रदर्शनमा आउँदैछ । पिता शोभित बस्नेतले निर्देशन गरेको फिल्ममा सलोन शिर्ष भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् भने प्रेमिका करिश्मा श्रेष्ठ अपोजिटमा प्रस्तुत भएकी छन् ।
‘बाबु कान्छा’ को प्रदर्शन मिति नजिकिंदै गर्दा बाबु कान्छा भने प्रचार प्रसारमा छैनन् । फिल्म ‘यात्रा’ छायाँकनका लागि सलोन यतिबेला सोलुमा छन् । बुझिए अनुसार ‘यात्रा’को छायाँकन तत्काल सकिने छैन्, केही साता लाग्नेछ । सुटिंग नसकिएसम्म सलोन आफ्नो फिल्मको प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन असम्भव छ । त्यसैले सलोनका कारण ‘बाबु कान्छा’को प्रचार प्रसार प्रभावित हुने देखिएको छ । टिजर हेर्नुस् :
यसैले शोभित उपलब्ध भएका कलाकार लिएर प्रचारमा हिंड्ने सोचमा छन् । ‘अब मिलाएर गर्छु, सलोन अर्को सातामा आउँछ’, निर्देशक बस्नेत भन्छन् । फिल्ममा सलोन र करिश्मासँगै ऋतिक शाही, सरोज खनाल, निर शाह, सम्राट सापकोटा लगायतको अभिनय छ । फिल्मको ट्रेलर यसै साता सार्वजनिक हुनेछ ।